🎼My Rising Star game - day 9🎸: I have unlocked Local Gig Circuit - PALnet
🎼My Rising Star game - day 9🎸: I have unlocked Local Gig Circuit
Yesterday, I have reached level 20 and finished some "Saturday Headline" missions. And it showed to me that to unlock higher mission I need 'i6 Mid Range Acoustic' guitar card. So I looked for one in the card collection market. It is fortunate that the guitar is not too expensive and I purchased one to unlock the 'Local Gig Circuit'.
However, I need at least 400 fans to perform the missions in the Local Gig Circuit and I still havealittle over 300 fans so far. So, I need more band members with more fans to perform music missions there.
Until now, I have gatheredafew band members and assets as follow:
I hope I can recruit more members and assets to perform bigger music campaigns later on.
Up till now, I have total fan - 317, Luck - 272, Skill - 634, IM -7and Ego - 470 after performing 203 missions. Thank you.
မနေ့ကကျွန်တော် level 20 ရောက်ပြီး "Saturday Headline" မစ်ရှင် အချို့ကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ နောက်ထပ် အဆင့်မြင့်တဲ့ မစ်ရှင်တွေ ပြုလုပ်ဖို့ 'i6 Mid Range Acoustic' ဂီတာ တစ်လက်လိုတယ်ဆိုလို့ စျေးမှာ ရှာကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ ကံကောင်းစွာပဲ ဂီတာရဲ့ တန်ဖိုး စျေးသိပ်မများတာကြောင့် တစ်လက်ဝယ်ယူပြီးတဲ့အခါမှာတော့ 'Local Gig Circuit' နယ်မြေသစ်ဟာ ပွင့်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီနယ်မြေသစ်မှာ မစ်ရှင်တွေပြုလုပ်ဖို့ ပရိတ်သတ် အရေအတွက် အနည်းဆုံး ၄၀၀ လိုအပ်တာတွေ့ရပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ ကျွန်တော့်မှာ ပရိတ်သတ် ၃၀၀ ကျော်သာရှိသေးတာမို့ အဲမှာ မစ်ရှင်တွေလုပ်ဖို့ဆိုရင် ပရိတ်သတ်ရှိတဲ့ member တွေထပ်လိုအုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်ထိ ကျွန်တော့်ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေက အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်နောက်ထပ် အဖွဲ့ ဝင်သစ်တွေ ခေါ်ယူပြီး ဒီထက်ကြီးတဲ့ မစ်ရှင်တွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ခုချိန်ထိ ကျွန်တော့်ဆီမှာ ပရိတ်သတ် အယောက် ၃၁၇ ယောက်၊ ကံ ၂၇၂၊ ကျွမ်းကျင်မှု ၆၃၄၊ IM ၇ နဲ့ အတ္တ ၄၇၀ ရှိပြီး မစ်ရှင်ပေါင်း ၂၀၃ ခုကို ဖျော်ဖြေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
hive-131619 creativecoin palnet myanmar trafficinsider neoxian proofofbrain oneup risingstar play2earn
@princekham, I sent you an $LOLZ on behalf of @golden.future
@risingstargame(1/10) tipped @princekham (x1)
Local Gig Circuit ပွင့်သွားပြီပေါ့...!LOLZ